Semalt Nyanzvi Inotsanangura Zvinhu Zvikuru Zvaunofanira Kuziva NezveRegex Scraper
Itai zvikumbiro nemashoko anowanzoitika:
Maitiro akasiyana-siyana akaitwa nemazwi anowanzoitwa kana kuti regex - weird melbourne cup hats. Ne PowerGREP, tinokwanisa kutsvaga kuburikidza nemafaira uye mafaira pamakombiyuta edu, shandura dheta uye kuunganidza mashoko kubva kune zvakasiyana-siyana. PowerGREP injini nguva dzose injini inowirirana ne Pearl,. Net uye Java zvigadziriswe uye inobatsira kune vateereri, webmasters, uye vateereri vepurogiramu. Kana iwe uchida kuvaka purogiramu yebasa kana kuti foni, unogona kuchengetedza nguva yakawandisa uye simba nemashoko anowanzoitika. Iwe unongoda kuisa mabhuku mashomanana kuti uwane unhu hwakagadzirwa. RegexBuddy uye EditPad Pro mapurogiramu maviri akaenzana akavakwa nemashoko anowanzoitika.
Inokodzera kune vasiri mapurogiramu:
Purogiramu ye regex inofanidza chinangwa chata. Iyi muenzaniso inoumbwa nekuenzanisa kweatomu. Atomu inongova imwechete mu regex pattern iyo inoshandisa tambo nenzira iri nani. Iko kune gumi nemana regex vanhu, zvichibva pane zvavari kureva uye zvinoshandiswa.
XPath - Chishandiso chine simba kwauri:
XPath ndechimwe chezvinhu zvakanakisisa uye zvinobatsira zvinyorwa zvinyorwa s uye zvinyorwa zvekare. Iyo inounganidza mapepa epa data kubva pamapeji ewebhu akasiyana, inoita zvisungo uye inoronga demo mumutauro unooneka uye unogona kupera. XPath inotanga kuzivisa zvinyorwa zvewebsite, inoongorora unhu hwayo uye huwandu hunhu hwehuwandu huri iwe. Iyi injini yekutsvaga uye webhuta yewebhu inopa yakawedzerwa regex zvidzidzo, zvakadai sekudzoka shure, POSIX nhamba uye kushandura.
Imwe mutsara weRegex inogona kutora mitsara zana yemitemo:
Mutsara mumwechete we regex wakakwana kuti udzokere kusvika kumiganhu 100 yemitemo kubva pawebhu peji. Zvinoreva kuti haufaniri kudzidza kudzidza zvakanakisisa purogiramu kuitira kuti basa rako riite. Nekutaura nguva dzose, zviri nyore kwazvo kuongorora data kubva kune mawebsite akasiyana-siyana uye kugadzira mapepa emadhina nemaketani.
Kutaura nguva dzose ibasa rinokosha pakutsanangura uye kutora webhu zvayo. Vanopa ruzivo rwakakura rwevashandi uye vakakodzera kune vose vadzidzisi uye vasiri vadzidzisi.